Inofungidzirwa kuti Apple yakatengesa anopfuura mamirioni e3,9 Apple Tarisa muQ3 | Ndinobva mac
Javier Porcar | | Noticias, dzakawanda
Apple haina kumboburitsa pachena pane huwandu hweApple watches yainotengesa. Uyu mubvunzo watinozvibvunza isu mune yega yega hurukuro, pavanounza chimwe chinhu chitsva maererano neApple wachi. Isu tinoziva kuti nhasi ndeimwe yemawindo anotengesa zvakanyanya pasirese, asi isu hatina data rehuwandu, rakapihwa nekambani. Zvirinani, mukuburitswa kwayo kwekupedzisira kwemhedzisiro, yakapa data rakanangana: iyo kambani yakanga yatengesa 50% mamwe mawachi, zvichienzaniswa negore rapfuura. Nhasi tadzidza kubva kuruoko rekambani yekuongorora Canalys, kutengesa ikoko kungadai kwasvika pamamirioni e3,9 mukota yechitatu.
Zviripachena ino inguva yekutanga kubva kuvhurwa kweApple Watch izvo, kudiwa kwapfuura kupa. Kune rimwe divi, vanoshanda vashamisika zvine chekuita nezvikumbiro zvevatengi vavo nezve kana vachizopa LTE sevhisi kuApple Watch. Yeuka kuti iyo Apple yekuona nhevedzano 3 LTE inogona kubatana kune network pasina zvichienderana neiyo iPhone, sekureba sekunge tine chaiyo SIM. Zvinoenderana nerunyerekupe rwekupedzisira, sevhisi iyi ichasvika kuSpain kubva munaNdira 2018.
Kufungidzira kwaCanalis kunoratidza kuti vamwe 800.000 vashandisi vangadai vakasarudza iyo LTE modhi. Kana isu tichifunga nezvekuti chikamu chechitatu chinofukidza Chikunguru, Nyamavhuvhu naGunyana uye neApple Watch nhepfenyuro 3, yakatanga kutengeswa munaGunyana, inoratidza kukwevera kweiyo ichangoburwa Apple wachi modhi.
Kufungidzira kwekutengesa kweakateedzana 3 zviri nani. Kutengesa kwewachi kuChina hakusati kwatanga, sezvo hurumende yenyika yakapa vhoti sevhisi yeLTE yeApple Watch. Kune rimwe divi, iyo yekupedzisira kota yegore yakagara iri yakanaka kwazvo kune Apple Watch kutengesa. Sezvo zvinotarisirwa munhevedzano ye3 zvave zvakakwirira kupfuura zvakateedzana 2, zvese zvinoita senge zvinoratidza kuti nhevedzano 3 inomirira kuiswa kwakasimba mumwedzi inotevera
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Inofungidzirwa kuti Apple yakatengesa anopfuura mamirioni e3,9 Apple Watch muQ3
Iye zvino muMicromanagement mune chipo chakavimbiswa chekutenga Mac